यो लेख श्रावण ११ गते मंगलबारको नेपाल समाचारपत्र बिचारपृष्ठमा "एनिमल फार्म उपन्यास र नेपाल-खेत" शिर्षकमा छापिएको थियो ।
१९४५ मा एउटा उपन्यास प्रकाशित् भयो जस्को नाम थियो एनिमल फार्म । त्यो पुस्तकको प्लट हुबहु नेपालको बिगत–बर्तमान राजनीतिक परिपेक्षसँग मेल खान्छ ।
सम्झिनुस् यो देश तेही खेत हो जस्को यहाँ चर्चा गरिदै छ । एउटा खेतमा एउटा मान्छेले बिभिन्न जनावर पालेर राखेको हुन्छ । थरिथरिका बानी व्यबहार चालचलन, बिचार वा सिद्धान्त बोकेका ती जनावरहरुलाई त्यो मान्छेले क्षमता र दक्षता अनुसारको काम दिएको हुन्छ । गाईले दुध दिनै पर्ने हुन्छ, गोरुले खेत जोत्नै पर्ने हुन्छ, कुखुराले अन्डा पार्नै पर्ने हुन्छ, जुनसुकै जनावरले आफुले सकेको र प्रकृतिको देन अनुसारको काम गरेकै हुन्छ । त्यस्बाट आउने प्रतिफल मान्छेले बढी लिएको हुन्छ र बाँकी सबैलाई महत्वका अधारमा बाँड्फाँड गरेको हुन्छ । काम बढी गर्नेलाई मान्छेले माया गर्दछ र काम गर्न नसक्ने लाई दया गर्दछ, ठग्नेलाई सजायपनि दिन्छ । केही अपवादलाई छोडेर त्यो खेत एक कानुन र ब्यबस्थाको पर्याय थियो ।
खेतका मालिक मिस्टर जोन्सका लागि त्यो खेत ‘ल’ र अर्डरले भरिपूर्ण थियो तर खेतका बाठा भनिएका सुङुरहरुको लागि त्यो पूर्णतया स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन थियो । साँझ परेपछि सुङ्गुरनाके टाउकाहरु सल्बलाउन थाल्छन् र अन्य दोपाया चरा वा चौपाया जन्तुहरुलाई ज्रुम ज्रुम पार्ने क्रान्तिका नारा कानमा फुक्न थाल्छन् । क्रान्तिको भुङ्ग्रोले पहिलोपटक मानबिय सत्ता च्युत गर्न सक्दैन । दोस्रो क्रान्तिको ज्वालाले मिस्टर जोन्सको मानवतन्त्रलाई ‘कु’ ग¥यो । अब प्रजातन्त्र आयो, नयाँ युगको सुरुवात, जहाँ जनावरले गरेको कामको शोषण गर्न कुनै गैरजनवर हुने छैन । सबै जनावरले सोचेको रामराज्य तर त्यो खेतमा कहिल्यै आएन ।
त्यहा सुङ्गुरहरु थिए, सुङ्गुरका पिछेलगुहरु थिए । सुङ्गुरहरु बुद्धी खेलाउन सिपालु अनि पिछेलगुहरु पावरका पूजारी । त्यहाँ अब सुङ्गुरतन्त्र छायो । सुङ्गुरका मुल्भुत गुटहरु बने । स्नोबल र नेपोलियन (दुई सुङ्गुर नेताहरु) बीच बैचारिक युद्ध चल्यो । कस्ले अब सारा खेतको सत्ता सम्हाल्ने भनेर बहस हुन थाल्यो, चुनावको कुरा उठ्यो । सुङ्गुर सुङ्गुरबीच मत बिमत भएपनि बिचरा तलका श्रमजीवी जनावरहरुको हालत पहिलाको भन्दा दुगुना खराब भएको थियो । कामको लोड दिनानुदिन थपिदै थियो । उनीहरुको श्रमको प्रतिफलले अब थुप्रै सुङ्गुरहरु पालिनु पर्थ्यो, किनकी सुङ्गुरहरु अब काम गर्नेवाला थिएनन् । पहिल्यैदेखि भजिदै आएको जनावरका सात कानुन अब समयसापेक्ष अर्थ्याइदै थियो र आंशिक रुपमा परिमार्जितपनि हुँदै थियो ।
पछि मेनोर फार्मको सत्ता नेपोलियन नामक सुङ्गुरले हाँसिल गर्छ । सुङ्गुरहरुले मानिसको अइयासी देखेका हुन्छन । शक्तीकेन्द्रमा आएपछि उनीहरुलाई पनि यस्को लालसा हुन्छ । आन्दोलनको दौरानमा तयार पारिएको सात कानुनमध्य चौथो नम्बरमा लेखिएको हुन्छ “कुनै जनावर ओछ्यानमा सुत्ने छैन” । सत्ता प्राप्तीपछि सुङ्गुरहरु नै तेही ओछ्यानमा सुत्छन् र अरु जनावरका मुख टाल्न कानुनलाई यसो भनेर परिमार्जित गरिन्छ, “कुनै जनावर् ’तन्ना भएको’ ओछ्यानमा सुत्ने छैन” । त्यस्पछि तन्ना निकालेर उनीहरु नियम सम्मत ओछ्यानमा सुत्न थालछन् । त्यस्तै पाँचौ नम्बरको कानुन हुन्छ कुनै जनावरले रक्सी पिउने छैन । सुङ्गुरहरुले आफ्नो अनुकुल कानुनलाई बङ्ग्याएर “कुनै जनवर ले ’मातिने गरी’ रक्सी पिउने छैन“ भन्ने बनाँउछन् । एबम रितले साताँै कानुन हुन्छ, सबै जनावर समान हुन् । त्यस्को परिमार्जित स्वरुप हुन्छ, “सबै जनवर समान हुन तर केही जनावर अरुभन्दा बढी समान हुन्” ।
नेपालखेतमा राजनैतीक एलिटहरु बढी समान छन्, तलका जनताहरु कम समान छन् । बढी समान महानुभावहरुले नै पालैपालो सत्ताको बाग्डोर समाल्ने अवसर पाउनु हुन्छ । केही कम समान महानुभावहरु आफ्नो स्वार्थ पोषणका खातिर बढी समान महानुभावहरुको पछिपछि बिभिन्न कित्ता बनाएर बिभक्त हुन्छन्, जस्लाई माथिको मेनोर खेतमा पिछेलगु भनियो । अनि धेरै जसो कम समान महानुभावहरु बढी समान महानुभावहरुलाई पिठ्यु चडाएर माथि पुर्याउने र टिठ लागुन्जेल उनीहरुको तमाशा हेर्ने गर्नु हुन्छ । बिचरा उनीहरुसगँ उपाय नै अरु छैन ।
सबैभन्दा बिस्मातको कुरा यहाँ नेपोलियन जस्ता सुङ्गुरहरु थुप्रै भए । जसरी सुङ्गुरको थुतुनो सधैं फोहोरमै जोतिन्छ, यहाँका नेपोलियनहरुको थुतुनो शक्ती र सरकारी ढुकुटीतिर जोतिन लालाइत भई नै रहन्छ ।
एउटा नेपोलियनले अलिखित र अदृष्य अइयासी गरी भ्याएकै हुँदैन, सुङ्गुरमध्येका अर्का कुनै भलाद्मी सुङ्गुर नेपोलियन बन्न खोजी हाल्छ । धेरै सुङ्गुरमध्ये एउटालाई नेपोलियन बनाउदा करीब दश जना आफ्नो नेपोलियन बन्ने नम्बर हातको औंला गनेर बस्छन् । तन्नै नभएको भएनि ओछ्यानमा सुत्ने धोको पुर्याउन उनीहरु मरी मेट्छन् । ओछ्यान त आखिर ओछ्यान नै हो, तन्ना नभएपनि नरम गद्दा छ त्यहाँ । नमात्ने भएनि एकैपटक सहि सबै सुङ्गुर रक्सी चाख्न चाहन्छन् ।
जबकी आपसी सहयोग र समझदारी बिना खेत दल दलबाट निस्कन भगवान कृष्णनै आएपनि असम्भव छ भन्ने कुरा जगजाहेर हुँदाहुँदै खेतका सुङ्गुरहरु किन बारम्बार तेही नेपोलियनको कुर्सीमा जान दाउपेच गरिरहन्छन् ? आज एउटा नेपोलियनलाई च्युत गराएर अफु नयाँ नेपोलियन हुँदा आफ्नो पिठ्यु पछाडिपनि थुप्रै भावी नेपोलियनहरु सल्बलाई रहने छन र अफुलाई पनि त्यसरी नै च्युत गर्ने छन् भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै यो कुर्सी मोह फगत केका लागि? कारणः सुङ्गुर साह्रै लोभि जात हो, आफ्नो भोक तृप्तीका लागि ऊ सधैं नै गनाउने फोहोरमा सुंड गाड्न उद्यत रहन्छ । सुङ्गुरले जमीन देख्छ र जमीनको गनाउने बस्तु सँुघ्छ, उस्लाई आकाशको अस्तित्व कहिल्यै थाहा हुने छैन । किनकी उस्ले न कहिल्यै माथि फर्केर हेर्दछ, न उस्लाई त्यस्को कुनै जरुरत नै छ । जे कुरा उस्ले देखेकै हुँदैन त्यो कुरा उस्ले पत्याउन सक्दैन । आकाश भनेको अग्रगमन हो, उज्यालो सुर्य र चन्द्रको स्रोत अनि प्राण धान्ने बर्षात बर्षने र हावा बहने माध्यम हो । सुङ्गुरको जीवनमा आकाश मिथ्या हो, गु मात्र सत्य हो ।
यो खेतका लागि नेपोलियनको कथा सधैं जीवन्त हुने भयो, केवल कथाका पात्र वा अनुहारमात्र फेरिरहने ।
© Adhikary Rabindra 2016